A na-ejikarị nkume peridot dịka ihe ịchọ mma: mgbaaka, olu, mgbaaka - vidiyo
Tags Cambodia, Mondulkiri, Peridot
Nkume Peridot bụ olivine nwere àgwà ọma. Ọ bụ mineral silicate na-abụkarị anyị ka peridot gemstone jewelery: yiri mgbaaka, olu, mgbaaka…
Ọ bụ mineral silicate na usoro nke (Mg, Fe) 2SiO4. Dika peridot bu magnesium bara ụba nke olivine (forsterite). Ọ na-abụkarị anyị dị ka ịchọ mma ịchọ mma nke peridot: mgbaaka, olu, mgbaaka.
Peridot bụ otu n'ime mkpụrụ nkume ole na ole na-eme na otu agba: olive-acha akwụkwọ ndụ. Otú ọ dị, ike na tint nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-adabere na pasent nke ígwè dị na ngwongwo crystal. Ya mere agba nke ihe bara uru nke onye ọ bụla nwere ike ịdị iche site na odo, na olive, na-acha akwụkwọ ndụ. N'okwu ndị na-adịkarịghị, ọ nwere ike ime na ọkara-nke na-acha uhie uhie, nke dị ọcha na-acha ọcha na-enweghị odo edo edo ma ọ bụ nkpuchi aja.
Olivine n'ozuzu bụ nnukwu ịnweta, ma àgwà dị mma bụ obere obere. Nke a bụ n'ihi nsogbu na ịnweta kemịl n'elu ala. Anyị na-ahụkarị olivine ka obere ọka. Na-echekwa ịdị na-adị na steeti siri ike, na-ekwesighi ka eji eji ya eme ihe. Kristal buru ibu nke forsterite, ihe dịgasị iche iche a na-ejikarị ebipụta ihe ndị bara uru, dị obere; nke a na-ewere olivine dị oke ọnụ ahịa
Peridot nwere ogologo oge ederede. Papyri ochie na-edekọ ihe a na-egwupụta nkume ndị a dị ka 1500 BC. Isi ihe na-eme na ụwa oge ochie bụ Topazo Island (nke a bụ Zabargad ma ọ bụ St. Jọn's Island) na Oké Osimiri Uhie Ijipt. Na oge ochie, a na-ejikwa nkume rụọ ihe ndị e ji osisi rụọ. A manyere ndi mmadu bi n'ime obodo ichota onu ogugu ndi ozo dika ulo oru Fero. Akụkọ ọzọ na-ekwu na ndị na-ekwo ekworo bụ ndị nyere iwu ka ha gbuo ndị ọ bụla na-emebi iwu chebere àgwàetiti ahụ dum. Akụkọ ahụ gara n'ihu na ndị ọrụ ntụtụ na-arụ ọrụ n'ehihie nakwa n'abalị. Anyị nwere ike ịchọta ihe bara nnukwu uru mgbe chi bọrọ n'ihi na ha na-egbuke egbuke. Ndị na-egwuputa ihe ga-akara ebe ahụ n'abalị iji weghachite n'echi ya.
Ya mere, ihe kachasị njọ bụ ihe ntinye 310 carat (62 g) na Smithsonian Museum na Washington, DC
GAA: (MgFe) 2SiO4
Isi: Yellowish green
MGBE AHỤ AHỤ: 1.65 ka 1.69
NKWUKWU: 0.035 ka 0.038
AHỤKWỌ NDỊ SPECIFIC: 3.34
AKỤKỌ MOHS: 6.5 ka 7
Ngwongwo na-agwọ ọrịa Peridot
Ihe omumu omumu nke August.
Ekwuru na Peridot ga enyere mmadu aka isoro ochicho ya, ka oburu ezi okwu n’obi gi.
Ọ bụ nkume ga - enyere gị aka ịga n'ihu ma hapụ ihe gara aga. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịga n’ihu, ị ga-ahapụrịrị ịma gbasara ihe gara aga.
Nke a bụ nkume ị ga-eyi iji meziwanye ohere ị nwere ime ka nrọ gị bụrụ ihe ọhụụ.
Ọ na - eme ka ikike gị dịkwuo elu ma na - eme ka ị mara ihe ị na - eche. Dika anyi n’uche n’echeputa uche anyi. Ọ na-enyere gị aka iburu ibu ọrụ maka ndụ gị.
A na ejikọ ya na chakra obi.
Nkume a na-akwalite mmụba. Ọ na-enyere ndị na-esiri ike ịnabata aka. A na - ekwu ya iji nyere onye weghaara aka inweta ihe okike na obi ekele. Nke a ga - abụ ezigbo nkume diri anyị bụ ndị ọ dị mfe inye ma ọ na - esiri anyị ike ịnabata ihu ọma ma ọ bụ onyinye sitere n'aka ndị ọzọ.
Peridot na-akwalite ama ama. Nke a bụ okwute zuru oke maka ndị niile chọrọ ịnọ na ntanetị nke ọhaneze. Peridot gosipụtara ike na ume. Ihe ndị a bụ àgwà onye ọ bụla ama ama ga-achọ.
Iwere ihe olu n’eji okwute achoro gha eme ya na-eme onye n’enye ya obi uto ma nwe nchekwube. A gwara ya na gemstone a ga - ewepụ ụdị ekworo na ekworo.
A na-ekwukwa banyere okwute a iji zoo abalị. Na nke a, a ga-edobe nkume peridot n'akụkụ mgbochi gị. Chọghị nkume gemstone n'ihe ndina gị n'abalị, mana dịka ezigbo ihe ndina gị dị ka o kwere mee.
Peridot, site Mondulkiri, Cambodia
ịzụta ọnụọgụ anụ na ụlọ ahịa anyị
White zircon 4.85 CT
Tags Cambodia, Pailin, Zircon
Ludwigite-vonsenite bụ na Peridot
Tags Cambodia, Green, Pailin, Safaya
Gemstones si Cambodia
Tags Cambodia, nkume